Al-Shabaab: 'wax walba oo duula waa cadow' - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaAl-Shabaab: ‘wax walba oo duula waa cadow’
Maleeshiyada Al-Shabaab oo tababar ku qaadanaysa xero tababar oo ay ku leeyihiin gobolka Galgaduud. [Sawirka: AlJazeera]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegtay wax walba oo duula in ay moodaan cadawgooda sida uu sheegay Xasan Yacquub oo ah sarkaal sare oo Al-Shabaab ah, oo u jawaabayay kadib markii wariyaha Al Jazeera Xamsa Maxamed uu ka codsaday in ay ku duubaan diyaarada drone-ka ee kaamirooyinka lagu rakibo, xilli wariyaha uu barnaamij ka diyaarinayay maleeshiyada saldhig ay ku leeyihiin gobolka Galgaduud
“Wax walba oo duula oo aan ka ahayn shimbiraha, waxaanu u malaynaa cadaw,” ayuu yiri Xasan Yacquub.
Sanadadii u dambeeyay, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa dilay tobonaan dagaalyahan oo Al-Shabaab ah oo uu kamid ahaa hoggaamiyihii kooxda iyo ugu yaraan 10 kamid ahaa taliyeyaashooda sare.
Duqayntii ugu dambaysay oo ay drone-ka la eegteen Al-Shabaab ayaa bil kahor ka dhacday gobolka Jubdada Hoose.
Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa loo tababaray in ay iska qariyaan drone, haddii ay la kulmaan diyaarad jawi hoose ku duulaysa, ayna dhulka soo dhigaan, sida ay sheegeen saraakiisha Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa u dagaalamaysa sidii ay awooda uga tuuri lahaayeen dowladda Soomaaliya oo caalamka taageerayo, kadibna ay dalka ka samaystaan maamul iyaga u gaar ah oo Islaami ah.